1)Buurhakaba iyo Baydhabo oo aan xasilneyn
Mogadishu,5/10/2002 By Hassan Bariise (BBC)
Wararka ka imaanaya magaalooyinka Baydhabo iyo Buur Hakaba ayaa sheegaya in maanta xaaladaha magaalooyinkaasi aanay wanaagsanayn inkastoo haddana aanu dagaal ka soconin.
Magaalada Buur Hakaba ayaa iyadu ugu sii cajiib badan taasoo si nabad ah shalay gacanta ugu gashay guddoomiye ku xigeenka RRA-da Maxamed Ibraahim Xaabsade iyo ciidankiisa, laakiin saaka ka dib markii uu Xaabsade u kicitimay dhinaca degmada Baydhabo ayaa waxaa aayar ku soo gurguurtay ciidamo u dhashay deegaanka oo laakiin taabacsan Colonel Shaarguduud oo horena uu saldhiggoodu u ahaa tuulada Jameecada .
Nin magaciisa iigu sheegay Cabdullaahi Aadan Cumar oo loo yaqanno Yariisow oo ka madax ah ciidanka qabsaday Buur Hakaba oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in ay xir-xireen saddex masuul oo uu shalay magacaabay Maxamed Ibraahim Xaabsade kuwaasoo kala ah Maxamed Xasan oo laga dhigay taliyaha hawlgelinta ciidamada iyo Cabdi Ibraahim oo loo magacaabay Taliyaha Gaaska kuwaasoo labadaba lagu xiray saldhigga booliska ee degmada, halka Ibraahim Macallin oo isagana laga dhigay Wakiilka RRA-da ee degmada isagana la geliyey Xabsi Guri.
Guud ahaan xaaladda Buur Hakaba wey deggan tahay, waxaase jira kacsanaan xoog leh oo ay dadku ka baqayaan in amuurtan uu dagaal ka dhasho oo ay soo noqdaan ciidamadii Maxamed Ibraahim Xaabsade oo iskood isaga tegay saaka, oo dabadeedna la isku fara saaro magaalada dhexdeeda.
Wararka iyaguna ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ay weli halkaasi ka socdaan hawlo burcadnimo ah oo lagu boobayo hantida dadka intii markaasi loo arko in laga tabar ama qabiil xooggan yahay.
Waxaa sidoo kale ay dadka goobjoogga ka ah magaalada Baydhabo sheegayaan in boobkaasi socda ay wehliyaan xarig loo geysanayo dad badan iyadoo ilaa 24-kii saac ee la soo dhaafay la xir-xiray rag badan oo intooda badanna loo aaneynayo in ay gacan saar sokeeye la lahaayeen Colonel Shaarguduud.
Waxaa sidoo kale magaalada Baydhabo ka socda qax aad u fara badan iyadoo ay dadweynaha caadiga ahna magaalada kala baxayaan wixii hanti ah iyo carruur ah.
Waxaa amuurta si weyn u sii murjinaya kummanaan maleeshiyooyin hubaysan ah oo magaalada ka maqnaa muddo labo bilood ah oo soo galay magaalada Baydhabo maalmihii shalay iyo dorraad.
Waxaa xirmay ganacsigii waaweynaa intiisa badan, iyadoo xitaa dukaamada yar-yar qaarkood albaabbada loo laabay baqdin laga qabo in la boobo darteed.
Waxaa socda dadaal aan xoog badnayn oo ay wadaan masuuliyiinta gacanta ku dhigtay magaalada, kaasoo ay ku doonayaan in ay dadka kaga joojiyaan qaxa faraha badan waxaana ciidamo la dhigay goobaha baabuurta laga raaco iyo kantaroollada magaalada iyadoo dadka loo sheegayo in aanay dhibaato jirin oo ay iska negaadaan, laakiin cid warkaasi dhagaysan karta ayaanan jirin maaddama ay dadku ka cararayaan wax ay indhahooda ku soo arkeen.
2)Reer guuraa Soomaaliyeed oo lagu ciqaabay Kenya ! Nairobi,5/10/2002 (BBC Newsroom)
Reer guuraaga iyo madaxda degmada Tanariver ee Gobolka xeebta waddanka Kenya ayaa ka dacwoonaya sida ciidamada ilaalada duurjoogta ay ula dhaqmeen reer guuraa Soomaaliyeed oo xoolahooda la galay seera lagu ilaaliyo duurjoogta.
Madaxdaasi oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Golaha Suuqgeynta xoolaha nool ee Kenya Mr Ali Wario Fayya ayaa BBC-da u sheegay in ilaa soddomeeyo neef oo geel ah oo lahaayeen reer guuraagaasi ay leedeen ka dib markii ciidamada ay diyaarada heelkobtara ah u isticmaaleen in ay xoolaahaasi kaga soo saaaraan seerahaasi.
Boqolaal neef oo lo' ah ayaa ilaa iyo haatan ku haray seerahaasi dhexdiisa ka dib markii ciidamada ay soo ceeyriyen dadkii la jiray qaar kalena qabqabteen ayuu sheegay.
Cali Wariyo waxaa uu sheegay in reer guuragaasi ku nool aaggaasi oo ay abaara ba'an ku dhufteen ay galeen seeraha Kora Game Reserve si ay baad ugu helaan xoolahooda.
Waxaa uu sheegay in seerahaasi uu san lahayn wax deer ah ama wax astaan ah oo lagu garto in uu yahay goob laga xarimay in la galo, islamarkaana goobta uu ku yaala ay tahay halka kiliya ee uu doogga ku haray haatan dhamaan degmada Tanariver ee ay abaaraha aafeeyeen .
Ali wario Fayya ayaa caddeeyay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen ilaa lix qof oo ka tirsan reer guuraagani oo haatan maxkamad ku taala degmada Meru ee bariga waddanka ay dacwaddooda ka socoto.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay in ay tahay arin la yaab ah in dowladda Kenya ay ka sareysiinayso noolasha xoolaha dadweynaheeda tan dugaagga. "Dad ayaa subixii galay seerahaasi iyaga oo tijaar ah waxaana galabtii ay ka soo baxeen iyaga oo sabool ah ayuu yiri isaga oo ka sheekaynaya khasaaraha helay reer guuragaasi"
3)DKMG ah iyo mowqifkeeda shirka Kenya! Mogadishu,5/10/2002 ( Xasan Bariise -bbc newsroom )
Goleyaasha dowladda KMG ah ee Soomaaliya ee Xukuumadda iyo Baarlamaanka ayaa maanta magaalada Muqdisho shirar kala duwan ku yeeshay iyagoo ka hadlaya hadallo dhowaan ka soo yeeray diblomaasiyiin shisheeye oo jooga Nairobi.
Dibloomaasiyiintan ayaa ka hadlay sida ugu habboon ee ay la tahay in loo wajihi karo dib u heshiisiinta Soomaalida.
Shirkii Golaha Wasiirrada ee dowladda KMG ah ee Soomaaliya uuna shir guddoominayey ra’iisal wasaaraha Xasan Abshir Faarax ayaa maanta si weyn looga dooday saameynta uu yeelan karay hadal dhowaan ka soo yeeray diblomaasiyiin shisheeye ah oo ka hadlayey arrimaha dib u heshiisiinta Soomaalida.
Dood dheer kaddib, ayey Golaha Wasiirrada ee dowladda KMG ah soo saareen qoraal ay ku muujinayaan aragtidooda ku aaddan shirkaasi dib u heshiisiinta iyagoo isla markaana u jawaabaya diblomaasiyiintaasi shisheeye ee Nairobi kaga hadashay arrimaha Soomaalida .
Qoraalkaasi waxay dowladda KMG ah ku sheegtay in ay aad uga xuntahay kana soo horjeeddo aragtida diblomaasiyiintaasi ee ku wajahnayd gobollada woqooyi ee Soomaaliya. Dowladda KMG ah waxay soo jeedisay in ay diblomaasiyiintaasi dhowraan go’aamadii ururrada caalamiga ah iyo kuwa heerka goboleed ee laga soo saaray jiritaanka dhuleed iyo midnimada Qaranka Soomaaliyeed.
Qoraalkaasi dowladda KMG ah waxa lagu xusay in gobollada woqooyi ay yihiin qeyb ka mid ah Soomaaliya , waxaanay u soo jeediyeen in ay si buuxda uga soo qeybgalaan shirka dib u heshiisiinta ee dhowaan kooxaha Soomaalida loogu qabanayo dalka Kenya, oo dabadeedna qoladii wax tabanaysa ay madasha shirka ka sheegato waxa ay tabanayso.
Dowladda KMG ah waxay soo xustay in shirkii labo sano ka hor lagu qabtay magaalada Carta ee dalka Djibouti ee lagu heshiisiinayey Soomaalida isla markaana lagu soo dhisay dowladda KMG ah ay dowladaha qaar ku cilladeeyeen in aanay Soomalida u dhammi ka qeybgelin shirkaasi oo ay sababtaasna uga maageen dowladaha qaar in ay taageeraan dowladda KMG ah.
Haddana, waxa qoraalkaasi ka soo baxay shirka Golaha Wasiirrada ee dowladda KMG ah ee maanta lagu xusay in haddii aaanay gobollada woqooyi ama qaar ka mid ah kooxaha siyaasadda ka qeybgelin shirka dalka Kenya uu isaguna ku sifoobi doono mid aanan loo dhammayn oo ka liidan doona kuwii ka horreeyey, sidaas darteedna si loo soo afjaro dhibaatada Soomaalida loona dhiso dowlad Soomaaliyeed ay lagama maarmaan tahay in Soomaalidu u dhammaato shirkaasi soo socda .
Qoraalkan dowladda KMG ah waxa uu jawaab u yahay hadal ka soo yeeray dibloomaasiyiin joogta dalka Kenya oo ka hadashay shirka dib u heshiisiinta Soomaalida, kuwaasoo xusay in gobollada woqooyi ay yihiin dad gobannimo doon ah oo sidaasi darteedna mudan in la xushmadeeyo dareenkooda, sidaasi darteedna aanan loo baahnayn in shirka dhowaan loo qabanayo Soomaalida ay ka qeybgalaan dad ka socda magaca Jamhuuriyadda la magacbaxday Soomaliland oo aanu soo magacaabin maamulkaasi.